येशू मात्र प्रभु र राजाको रूपमा प्रकट भएको छ! - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
येशू मात्र प्रभु र राजाको रूपमा प्रकट भएको छ!
मे २०, २०२२ मार्च २७, २०१९ द्वारा प्रकाशक
“अनि मैले स्वर्ग खोलिएको देखें, र एउटा सेतो घोडा देखें। अनि उहाँमाथि बस्नेलाई विश्वासयोग्य र सत्य भनियो, र उहाँले न्याय र युद्ध गर्नुहुन्छ। उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थिए, र उहाँको शिरमा धेरै मुकुटहरू थिए। र उसले एउटा नाउँ लेखेको थियो, जसलाई कसैले जान्दैन, तर उनी आफैंले।" ~ प्रकाश १९:११-१२
यी धर्मशास्त्रहरूमा, अन्तिम स्पष्ट प्रकाश बनाइएको छ: एक मात्र साँचो मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, र विश्वव्यापी प्रभु र राजा: येशू ख्रीष्ट!
यो उस्तै पराक्रमी हो आत्मिक विजेता जो लडाईमा अघि बढे जब प्रकाशको पहिलो छाप खोलिएको थियो। त्यो समय बाहेक, सुसमाचारको दिनको सुरुमा, उहाँलाई एउटा मुकुट मात्र लगाएको देखाइएको थियो। उहाँ पहिले नै सबै मुक्तिको आध्यात्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो।
“अनि मैले देखेँ जब थुमाले मोहरहरू मध्ये एउटा खोल्यो, र मैले सुनें, यो गर्जनको आवाज जस्तै थियो, चारवटा जनावरहरूमध्ये एउटाले भन्यो, आऊ र हेर। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखें। अनि उसमा सवार भएको धनु थियो। र उसलाई एउटा मुकुट दिइयो, र ऊ विजयी र विजयी हुन अघि बढ्यो।” ~ प्रकाश ६:१-२
तर आध्यात्मिक रूपमा जित्न बाँकी रहेका अरूहरू थिए। यो एक आध्यात्मिक युद्ध हो, जसले उहाँलाई बचाउनेहरूको हृदयबाट साँचो प्रेम जित्न खोज्छ। एकचोटि तिनीहरूको हृदय जितिसकेपछि, उहाँलाई धेरै मुकुटहरूले ताज लगाउनेछन्।
"किनकि जसरी आदममा सबै मर्छन्, त्यसरी नै ख्रीष्टमा पनि सबै जीवित हुनेछन्। तर हरेक मानिस आफ्नै क्रममा: ख्रीष्ट पहिलो फलहरू; पछि उहाँको आगमनमा ख्रीष्टका हुनेहरू। तब अन्त आउँछ, जब उसले परमेश्वरलाई, पितालाई राज्य सुम्पनेछ। जब उसले सबै नियम र सबै अधिकार र शक्ति त्याग्नेछ। किनकि उहाँले सबै शत्रुहरूलाई आफ्नो खुट्टामुनि नराखेसम्म शासन गर्नैपर्छ। नाश हुने अन्तिम शत्रु मृत्यु हो। किनकि उहाँले सबै थोक उहाँको खुट्टामुनि राख्नुभएको छ। तर जब उहाँले भन्नुहुन्छ कि सबै चीजहरू उहाँको अधीनमा राखिएको छ, यो प्रकट हुन्छ कि उहाँ बाहेक सबै कुरा उहाँको अधीनमा राख्नुभयो। र जब सबै कुरा उहाँको अधीनमा हुनेछन्, तब पुत्र पनि उहाँको अधीनमा हुनेछ जसले सबै थोक उहाँको अधीनमा राख्नुहुन्छ, ताकि परमेश्वर सबैमा सबै हुनुहुनेछ। ~ १ कोरिन्थी १५:२२-२८
प्रकाश अध्याय 19 मा उसले विजय हासिल गरेको देखाइएको छ। त्यसकारण प्रकाश १९:१२ मा सबै मुकुटहरू येशू ख्रीष्टमा छन्। यी मुकुटहरूले आध्यात्मिक अधिकार र शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। आज मानवजातिको पतित धर्महरू, र मानवजातिको सरकारको, अब कुनै पनि आध्यात्मिक अधिकार छैन। तिनीहरू सबै पर्दाफास र पतित र भ्रष्ट देखाइएको छ।
सुसमाचार दिनको सुरुमा, द प्रकाश अध्याय १२ को अजगरको शिरमा मुकुट थियो, धेरैलाई मूर्तिपूजकता एक आध्यात्मिक राजा थियो भनेर देखाउँदै। तर Paganism पराजित भयो, र भूमिगत गएर प्रकाश अध्याय 13 को रोमन क्याथोलिक जनावर भित्र लुक्नु पर्यो। त्यसकारण प्रकाश १३ को जनावरको शिरमा कुनै मुकुट थिएन, बरु उसको सिङमा, मध्य युगको समयमा, पार्थिव राजाहरू सत्तामा थिए भनेर देखाउँदै। त्यसैले क्याथोलिक चर्चले ती विभिन्न राजाहरूलाई प्रभाव पारेर आध्यात्मिक शासन र शक्ति प्रयोग गर्नुपरेको थियो।
त्यसैले सुसमाचारको दिनमा, इतिहासभरि, मानवजातिको आत्माको लागि लडाइँ भएको छ, र राजाहरूका साँचो आध्यात्मिक राजा: येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्ने युद्ध भएको छ। त्यसकारण मूर्तिपूजक, क्याथोलिक चर्च र पतित प्रोटेस्टेन्ट गुटहरू, परमेश्वरका साँचो क्रिश्चियनहरू विरुद्धको लडाइँमा तिनीहरूको आफ्नै मुकुटको लागि लड्ने र तिनीहरूको लागि शारीरिक रूपमा मार्ने पनि थिए। त्यसैले शास्त्रमा हामीलाई निर्देशन दिइएको छ:
“परमेश्‍वरका चुनिएकाहरूलाई कसले दोष लगाउने? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। निन्दा गर्ने को हो? यो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो मर्नुभयो, हो बरु, जो फेरि बौरी उठ्नु भयो, जो परमेश्वरको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो लागि मध्यस्थता पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्नेछ? के सङ्कष्ट, वा कष्ट, वा सतावट, वा अनिकाल, वा नग्नता, वा खतरा, वा तरवार? जसरी लेखिएको छ, 'तपाईंको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौं। हामी मार्नको लागि भेडा जस्तै गनिन्छौं। होइन, यी सबै कुराहरूमा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने उहाँद्वारा हामी विजयीहरू भन्दा बढी हौं। किनकि म विश्वस्त छु, न त मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूतहरू, न राज्यहरू, न शक्तिहरू, न वर्तमान वस्तुहरू, न आउने कुराहरू, न उचाइ, न गहिराइ, न कुनै अन्य प्राणीले हामीलाई प्रेमबाट अलग गर्न सक्षम हुनेछन्। परमेश्वरको, जो ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा हुनुहुन्छ।" ~ रोमी ८:३३-३९
प्रकाश अध्याय 17 को अन्तिम जनावर, जो आत्मिक रूपमा पूर्ण रूपमा पराजित भएको छ,सँग कुनै पनि मुकुट थिएन। यसले देखाउँछ कि न त पशु संगठन, न त यस संसारका राजाहरूसँग, कुनै पनि धार्मिक आध्यात्मिक अधिकार छैन। सबै आध्यात्मिक अधिकार केवल राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुको रूपमा येशू ख्रीष्टमा निर्भर छ। किनकि परमेश्‍वरका साँचो सन्‍तानहरूले आफ्‍ना जीवनका सारा शक्ति र अख्तियार पूर्णतया परमेश्‍वरलाई सुम्‍पिदिनुभएको छ।
"अनि जब ती जनावरहरूले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, जो सदासर्वदा जीवित हुनुहुन्छ उहाँलाई महिमा र आदर र धन्यवाद दिन्छन्, तब चार र बीस जना एल्डरहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने उहाँको सामु घोप्टो पर्छन्, र सदा-सर्वदा जीवित उहाँको आराधना गर्छन्। , र सिंहासन अगाडि तिनीहरूको मुकुट हाले, यसो भन्दै, हे प्रभु, तपाईं महिमा, सम्मान र शक्ति प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ: तपाईंले सबै चीजहरू सृष्टि गर्नुभएको छ, र तपाईंको खुशीको लागि तिनीहरू छन् र सृष्टि गरिएका छन्। ~ प्रकाश ४:९-११
यी मुकुटहरू, सबै समयका सबै साँचो ख्रीष्टियनहरूको अख्तियारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, परमेश्वरलाई सुम्पिँदै छन् एसियाका सात मण्डलीहरूद्वारा व्याख्या गरिएको सुसमाचारको दिन पूरा भएको छ। (प्रकाश सन्देशले वास्तवमा "सुसमाचार दिन" कथालाई सात फरक पटक बताउँछ। प्रत्येक सुसमाचार दिनको कथा सधैं येशू ख्रीष्ट र उहाँको राज्यलाई विजयी रूपमा देखाउँदै अन्त्य हुन्छ। एशियाका सात चर्चहरू पहिलो हो।)
के तपाईंले आफ्नो मुकुट प्रभुको सामु हाल्नु भएको छ? के ख्रीष्टले तपाईंको हृदयमा विद्रोह र पापलाई जित्नुभएको छ ताकि उहाँ अब तपाईंको राजा हुनुहुन्छ? के तपाईंले आफ्नो जीवन र निर्णयहरूका लागि सम्पूर्ण अधिकार परमेश्वरको नियन्त्रणमा दिनुभएको छ?
नोट: तलको यो रेखाचित्रले उन्नाइसौं अध्याय पूर्ण प्रकाश सन्देश भित्र कहाँ छ भनेर देखाउँछ। अध्याय 19 को न्याय सन्देशहरू पनि पाखण्डको प्रभावलाई नष्ट गर्न परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्ने भाग हो। प्रकाशको उच्च स्तरको दृष्टिकोणलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तपाईंले "प्रकाश को रोडमैप।"
कोटीहरू विश्वासयोग्य र साँचो, राजाहरुको राजा, भगवानको राज्य, मुक्ति को शक्ति, प्रकाश १ ट्यागहरू युद्ध, मुकुट, न्याय पोस्ट नेभिगेसन
मानिस र स्वर्गदूतहरूको पूजा नगर्नुहोस्!